IiTattoos zehobe - Uyilo Lwetattoo
Ithetha ntoni iitotove zehobe kuwe?
yeyiphi iplanethi itaurus elawulwa
Ukubaluleka kweDove Tattoos
Chaza inyani. Ngaba ungayijonga itattoo yehobe uze ubone intaka kuphela, okanye ngaba iingcinga ezithile ezithi qatha kwangoko zithi qatha engqondweni? Ukuba bayayenza, ayothusi loo nto. Amahobe abonakala enendawo ekhethekileyo phakathi kwabahlobo bawo abaneentsiba.
Imikhono yeTattoo sleeve kunye nemibono
IiTattoos ezimhlophe zeTiger
Bangaphi abantu obabonayo kwimidlalo yeparakeet tattoos? Mhlawumbi azikho ninzi. Iitattoo zikaRobin? Mhlawumbi nje kancinci. Oongqatyana kunye neBluebirds ziiteki ezithandwayo kuba bahambisa iintsingiselo ezithile. Nangona kunjalo, akukho tattoo yeentaka zezilwanyana ethandwayo ukuthandwa kwee tattoo zehobe, kwaye oku kunokwenzeka kakhulu kungekuphela ngenxa yobabalo bendalo kunye nobuhle bendalo, kodwa kubungakanani obukhulu bomfuziselo oqhotyoshelwe kuzo.
Ijuba linokubaluleka okukhulu kwiinkolo zobuKristu, kwaye ke iiTattoos ezininzi zijongwa njengeempawu zeenkolelo zomntu, amahobe asetyenziselwa ukumela uMoya oyiNgcwele, icandelo lesithathu lobuthathu bobuKristu. Kananjalo, ihobe libonakala kuyo yonke iBhayibhile kunye nobugcisa obuninzi obujolise kubuKristu. Kukho ihobe elidumileyo elazisa igatya kuNowa, ebonisa ukuphela konogumbe omkhulu. Imifanekiso yehobe iquka nehobe elihla liza kuYesu njengokuba uYohane uMbhaptizi ebhaptiza. Eminye imifanekiso ibandakanya amahobe esihla kubapostile kunye neelwimi zomlilo ngePentekoste.
Ngokwesiko lakudala lamaJuda, ihobe lalibonwa njengesilwanyana 'esicocekileyo', esifanelwe ukubingelelwa kuThixo.
Njengophawu loXolo kunye neThemba
Isenokuba sisongezo sophawu lwenkolo, kodwa amahobe abonwa kakhulu njengophawu loxolo kunye nethemba ngekamva. Into emnandi ngale nto kukuba awunyanzelekanga ukuba ubambe iinkolo ezithile ukuze usebenzise ii-tattoo zehobe ngale ndlela. Okona kugqwesileyo, ezi taki ziimpawu zomnqweno, kwaye ngenxa yoko, phantse nabani na angazinxiba.
AmaCelt kunye nabanye abantu bamandulo babekholelwa ukuba amahobe kunye nezinye iintaka zazingabathunywa abazisa imiqondiso yokulunga okanye okubi malunga nokuza kwenzeka. Abantu baseJapan babekhe balitolika ihobe njengomthunywa ovela kuThixo wemfazwe, bephethe isabile ukubhengeza ukuphela kwedabi. Imifanekiso yehobe ethwele isebe lomnquma nayo ingajongwa njengomfuziselo womthunywa.
Njengophawu loBomi obutsha
Besihlala siphosa irayisi kwimitshato ukunqwenela umtshakazi nomyeni ithamsanqa kunye nempumelelo kubomi babo obutsha kunye. Ngoku sikhulula amahobe kwaye siwabukele ejikeleza njengoko bezihambela ngenqwelomoya egodukayo, kule meko, ukuthelekisa iitatoo zakhe kunye nehobe kunokuba yindlela elungileyo yokumisa amaqhina omtshato kunye nokuphawula umhla oqinisekileyo womsitho.
Njengophawu lobomi basemva kokufa
Nokuba unikezela kwinkolo ethile okanye hayi, uninzi lwethu lusakholelwa kubomi basemva kobomi obubandakanya umphefumlo womntu. Kwabanye, umvambo wehobe omhlophe unokuba ngumfuziselo womphefumlo okhululwe kwiqokobhe lawo elibonakalayo kwaye unyukela kwisiphelo sawo, nokuba yeyiphi na.
Ukuphefumlelwa koyilo lwehobe
Ihobe elilodwa linokuba ngumqondiso wobunyulu, kwaye lenze uyilo olukhulu lwe tattoo ukuphawula ukuzibophelela ekuziphatheni ngokwesondo kwi-bachelor kunye nokunyaniseka emtshatweni kamva.
Amahobe amabini abelana kwisebe elinye kuyilo oluthandekayo lwe tattoo kwisibini esandula kutshata.
Inkcazo yehobe ezaliswe uyilo lweflegi yaseMelika, okanye nayiphi na iflegi oyikhethileyo, inokujongwa njengengxelo malunga noxolo lwehlabathi.
Ngokuhambelana nomxholo wasemva kokufa, ihobe eliphethe isibhengezo sonyaka esingasetyenziselwa ukukhumbula ukudlula kothandekayo.
Amahobe kunye ne-White Ink
Nangona abantu abaninzi bekhetha ukuba nee-tattoos zabo zehobe ezifakwe kwi-inki njengemizobo emnyama, ukubaluleka kwamahobe kumhlophe kwaye ke ukuthwala imvakalelo yokucoceka kunzima ukungahoyi. Ngesi sizathu, uninzi lwabathandi bemidlalo baya kude kwaye uyilo lwabo luzaliswe nge-inki emhlophe. I-inki emhlophe eneneni iyinkohliso ukuyisebenzisa, kuba ithatha ubuninzi bayo ukubonisa ngokuchasene neethoni zolusu. Ngaphandle kokuba umculi wakho uqhelene nokusebenza nalo mbala, unokuphelisa ukonakala ngenxa yomsebenzi omdaka owongezelelweyo wokuhambisa ukhuseleko olufanelekileyo.
Umsebenzi Unxulumene Uxinzelelo Non-Diamond Engagement Rings Umntwana Yintoni Is Titter Amakhambi Ama Abafazi
I-Plus Size Accessories
Ukuthenga I-Engagement Ring
Isampulu yentombazana yentetho yodumo yodade
indlela yokucoca i-grill yentsimbi
Uguquko kwiikati kuthatha ixesha elingakanani ukusebenza
njani ukutsala indoda virgo ngokwesondo
indlela yokufumana iifoto kufacebook
I-Custom And Handcrafted Jew Jewelry